နေထိုင်ခြင်းအနုပညာ | Sanchaung Journal | Page 7
February 28, 2008 wunna	2 Comments
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံရဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကြားဖူးပါသလား…. ?
အေးခဲတဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာ ဘုရင်တစ်ဆူလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အက်စကီးမိုး လူမျိုးတွေက ဘာမှ အင်အားထုတ်စရာ မလိုဘဲ အဲဒီဝက်ဝံတွေကို ဖမ်းနိုင်တယ်။
ဘယ်လိုဖမ်းသလဲဆိုတော့ အက်စကီးမိုးတွေက ဖျံတစ်ကောင်ကို အရင်သတ်လိုက်ပြီး ဖျံရဲ့သွေးကို ပုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ ဓါးမြှောင်ကို သွေးထဲမှာ စိုက်ထားလိုက်တယ်။ အရမ်းအေးတဲ့အတွက် ဖျံသွေးဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ခဲသွားပါတယ်။ အဲဒီခဲသွားတဲ့ ဓါးမြှောင်ပါတဲ့ ဖျံသွေးကို ပုံးထဲကထုတ်ပြီး ရေခဲပြင်မှာ ပစ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
၀က်ဝံတွေက သွေးအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီအကြိုက်ကပဲ သူတို့ကို သေမင်းလက်ထဲ ရောက်စေခဲ့တယ်။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့ သူတို့ဟာ သွေးညှီနံ့ကို အဝေးကြီးကတောင် ရနိုင်ပါတယ်။ အက်စကီးမိုးတို့ ပစ်ထားတဲ့ သွေးခဲကို ခြေရာခံပြီး တွေ့တာနဲ့ အငမ်းမရ လျှာနဲ့ စတင်လျက်ပါတော့တယ်။ လျက်ရင်း လျက်ရင်း လျှာခဲသွားလည်း အစာကောင်းကို လက်မလွတ်ချင်တာနဲ့ ဆက်လျက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခဲနေတဲ့သွေးက ပိုချိုလာတယ်။ ပိုလတ်ဆတ်လာတယ်။ ပိုပူနွေးလာတယ်ဆိုကို သတိမထားမိတော့တဲ့ အထိပါပဲ။
လျက်လေ အရသာရှိလေ၊ အရသာရှိလေ လျက်လေနဲ့ သူတို့ရဲ့သွေးကို သူတို့ သောက်နေမိမှန်းတောင် မသိကြတော့ပါဘူး။ အကြောင်းက သွေးခဲအလယ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ဓားက လျက်နေတဲ့ သူတို့လျှာကို လှီးဖြတ်နေခဲ့လို့ပဲ။ အအေးဓာတ်ကြောင့် ထုံနေတဲ့ လျှာက နာကျင်တာကို မခံစားမိတော့ဘူး။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့ နှာခေါင်းက လတ်ဆတ်တဲ့ သွေးနံ့ရလေ လျက်နှုန်းက မြန်လေလေ နောက်တော့ ကိုယ့်သွေးကို ကိုယ်ပြန်သောက်နေမိတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သွေးထွက်လွန်ပြီး မူးလဲသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အက်စကီးမိုးတွေက သူတို့ကို ဘာအင်အားမှ မသုံးဘဲ ဖမ်းလိုက်ရုံပါပဲ။
ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ လွဲမှားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း ပိုလာဝက်ဝံနဲ့ တူသွားနိုင်တယ်။ တစ်ချို့လူတွေက အလုပ်ချိန် များများလုပ်လေ ပိုအောင်မြင်လေလေ ၀င်ငွေများများ ရလေလေလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အဲဒီငွေကြေးကို ဖြုန်းဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ကြဘူး။ တစ်ချို့က အဲဒီငွေကြေးကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်မှန်း မသိကြဘူး။
၀င်ငွေများလာတာနဲ့နည်းတူ တစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ချို့အရာတွေကို သူတို့ဆုံးရှုံး ကြရတယ်။ လူ့ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာဖြစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့ အချိန်တွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ မိဘမေတ္တာငတ်နေတဲ့ သားသမီးတွေ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီဖို့အရေး ဆိုတာကိုတောင် သူတို့ မေ့နေခဲ့ကြတယ်။
အမေရိကားရဲ့ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တစ်ခုက အငြိမ်းစားယူကုန်ကြတဲ့ ထိပ်သီးစီးပွါးရေး ပညာရှင် ဆယ်ဦးကို မေးခွန်းမေးပြီး စာရင်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မေးခွန်းက “ တကယ်လို့ ဘ၀ကို အသစ်ပြန်စရရင် သင်အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ လက်မလွတ်ချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ” တဲ့။ ပညာရှင် ခုနှစ်ဦးက တူညီတဲ့ အဖြေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဖြေက “ တကယ်လို့ ဘ၀ကို အသစ်ပြန်စရရင် သားသမီးတွေနဲ့ အတူနေတဲ့ အချိန်ကို လက်မလွတ် ချင်ဆုံးပါ” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။
တစ်ချို့လူတွေက ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် နောင်တမရဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မဆုံးဖြတ်ခင် သေချာ မစဉ်းစားခဲ့ရင် နောက်ဆုံးတော့ နောင်တ ရကြစမြဲပါပဲ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ ငွေဟာ ရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့ အရာပါတဲ့… ရှာလေလေ ရလေလေ လိုချင်လေလေ နောက်ဆုံးတော့ လုံလောက်ပြီလို့ မထင်ဘဲ ငွေနောက်ကိုပဲ ကောက်ကောက်ပါ ကုန်ကြတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုလာဝက်ဝံလို ကိုယ့်သွေးကို သောက်ပြီး ပျော်နေကြတဲ့လူ ဖြစ်နေခဲ့ပြီလား…
တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့လူက ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူး။
Article Curtsy Ms. Nine Nine Sanay
February 17, 2008 admin	1 Comment
စကားတစ်ခွန်း ဒွန်တွဲပါလာတယ်။ ။
ရေတစ်ခွက်စာ စဉ်းစားမှုပါလာတယ်။ ။
ပေးဆပ်ရမယ့် ၀ဋ်ကြွေးစာရင်းတွေပါလာတယ်။ ။
ချွေးသီးတွေကျ၊ မြေခရတဲ့ ဒီခရီး
အဆုံးသတ် အရိပ်ကလေးတစ်ခု ပြလှည့်ပါ
ရယ်သံတွေကြား ခဏပျော်ချင်လို့။ ။
ငိုသံတွေအနားက ခဏခွာချင်လို့။ ။
သူကတော့ အကောင်းဆုံးလက်တို့ ပေးပြန်တယ်။
February 16, 2008 wunna	Leaveacomment
အီဂျစ်အဆိုအမိန့်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ‘နိုင်းမြစ်ကြီးကမပြောင်းလဲပါဘူး၊ ပြောင်းလဲနေတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေပါ’ တဲ့။
အီဂျစ်မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ သူက မျက်စိမမြင်ရှာဘူးတဲ့။ မျက်မမြင်ဘ၀မို့လို့ သူ့ကိုယ်သူ မကျေနပ်ဖူးတဲ့။ သူ့မှာ ရည်းစားတော့ရှိတယ်။ သူ့ရည်းစားကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ မကျေနပ်ဖူးတဲ့။ သူ့ရည်းစားကတော့ သူ့ကိုသိပ်ချစ်ပြီး သူ့ဘေးမှာ တစ်ချိန်လုံး နေပေး နေပါသတဲ့။ တစ်နေ့မှာကောင်မလေးက ‘အစ်ကိုရယ်’တဲ့ ‘ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကို မြင်ခွင့်ရရင်၊ ဟောဒီ နိုင်းမြစ်ကြီးစီးဆင်းနေတာကို မြင်ခွင့်ရရင် ကျွန်မအစ်ကို့ကို လက်ထပ်ပါ့မယ်’ လို့ ပြောသတဲ့။
တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးကအီဂျစ်ဆေးပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးနဲ့ တွေ့သတဲ့။ ဆေးဆရာကြီးက မင်းချစ်သူရဲ့ မျက်လုံးတွေကို အကောင်းပကတိအတိုင်း ပြန်မြင်အောင် ငါကုပေးနိုင်ပါတယ် လို့ပြောသတဲ့။ ဒါနဲ့ ကုကြရောဆိုပါတော့။ နောက်ဆုံးတော့ ကောင်မလေး ရဲ့ မျက်စိနှစ်ကွင်းဟာ အလင်းရသွားပါတယ်။ ကောင်မလေးက သိပ်ပျော်သွားတာပေါ့။ အီဂျစ်တိုင်းပြည်ကြီး ဟာ နေရောင်အောက်မှာ လှလိုက်တာ။ နိုင်းမြစ်ကြီးကလည်းစီးဆင်းလို့။ စွံပလွန်ပင်တွေကလဲ စိမ်းစိုလန်းဆန်းလို့။
သူ့ချစ်သူကောင်လေးကတော့ သူ့လိုပဲ မျက်မမြင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါ သတဲ့။ ကောင်လေးက ‘အခု ကမ္ဘာလောကကြီးကို မြင်ခွင့်ရပြီ၊ နိုင်းမြစ်ကြီးစီးဆင်းနေတာကိုလဲ မြင်ဖူးပြီ။ ဒို့လက်ထပ်ကြစို့’ လို့ ဆိုသတဲ့။ ကောင်မလေးက ‘ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ မျက်မမြင်တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်နိုင်မှာလဲ’ လို့ ပြောပြီး ကောင်လေးကို ငြင်းပယ်လိုက် ပါရောတဲ့။ ကောင်လေးခမျာ ဘယ်လိုတောင်းပန်လို့မှ မရတဲ့အဆုံး မျက်ရည်တွေနဲ့ခွဲခွာ သွားရှာ ပါသတဲ့။ နောက်တော့ ကောင်မလေးဆီကို ကောင်လေးဆီက စာကလေးတစ်စောင် ရောက်လာပါတယ်။ ‘သူ့ကိုမချစ်တော့ပေမယ့် သူ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုတော့ ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ပေးပါ’ တဲ့။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ လူတွေရဲ့စိတ်တွေဟာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲ နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အားအနည်းဆုံးအချိန်တွေတုန်းက ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲရှိနေပေးတဲ့သူတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးတတ်သူ ဆိုတာ သိပ်နည်းပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော နိုင်းမြစ်ကြီးကတော့ စီးဆင်းနေဆဲပါ။
February 14, 2008 wunna	3 Comments
Epiphyllum ပန်းက တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲပွင့်ပြီး ပန်းပွင့်ချိန် ၄. ၅ နာရီသာ ကြာမြင့်တဲ့ ပန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးပွင့်ရတဲ့ တိုတောင်းချိန်ကို သူဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဖူးပွင့်ရဲတဲ့ အစွမ်းသတ္တိကိုပဲ သူထုတ်ပြခဲ့တယ်။
For that person has helped you learn about trust and the importance of caution.
Love back unconditionally; that one is teaching you to love.
Appreciate every moment and take from those moments everything that you possibly can,
Talk to people that you have never talked to before — and actually listen.
For if you don’t believe in yourself, it will be hard for others to believe in you.
Most importantly, if you love others, tell them,
For you never know what may come tomorrow.